भरतपुर अस्पतालमा नियो न्याटल भेन्टिलेटर जडान हुँदै | चितवन पोष्ट
भरतपुर अस्पतालमा नियो न्याटल भेन्टिलेटर जडान हुँदै
भरतपुर । सरकारी अस्पताल भरतपुरमा हाल नयाँ नियो न्याटल भेन्टिलेटर जडानको काम भइरहेको छ ।
श्वासप्रश्वासमा समस्या भई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएका नवजात शिशुको नियो न्याटल भेन्टिलेटरको अभावमा उपचार हुन नसक्दा २ हप्ताअघि मृत्यु भएको थियो ।
उपकरण अभावमा बालक मृत्युसम्बन्धमा चितवन पोष्टमा समाचार प्रकाशन भएपछि अस्पताल प्रशासन अहिले उक्त उपकरण जडान कार्यमा जुटिरहेको छ । नयाँ उपकरण जडानका लागि अहिले एनआईसीयू सेवा नै बन्द गरिएको छ ।
जन्मेपछि २८ दिनसम्मका शिशुको नियो न्याटलमा राखेर कृत्रिम श्वासप्रश्वासबाट उपचार गरिन्छ ।
बिग्रेको नियो न्याटल भेन्टिलेटर मर्मत नहुँदा र नयाँ भेन्टिलेटर पनि जडान नहुँदा केही दिनअघि एक नवजात शिशुले ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।
यो उपकरण नहुँदा एनआईसीयूमा उपचाररत अन्य नवजात शिशुहरुलाई जुनसुकै बेला पनि नियो न्याटल भेन्टिलेटर चाहिने अवस्थामा उनीहरुको ज्यान तलमाथि हुन सक्ने भन्दै भरतपुर अस्पताल प्रशासन नयाँ उपकरण जडानमा लागेको हो ।
नियो न्याटल भेन्टिलेटरको अभावमा अब कुनै पनि नवजात शिशुले ज्यान गुमाउन नपर्ने अस्पतालका मेसु डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । एनआईसीयू सेवा नै बन्द गरेर भए पनि नयाँ मेसिनहरु धमाधम जोड्ने काम भइरहेको मेसु पौडेलले जानकारी दिए ।
अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. युवानिधि बसौलाले नियो न्याटल भेन्टिलेटर राख्नका लागि अहिले अक्सिजन पाइप जडानको काम भइरहेको बताए । विगत ४ दिनदेखि अस्पतालको एनआईसीयू कक्ष नै बन्द गरेर धमाधम काम भइरहेको डा. बसौलाले जानकारी दिए ।
‘रोग संक्रमणका हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील एनआईसीयू कक्ष बेलाबेलामा सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि तीन दिनसम्म खाली गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ अस्पतालमा जन्मिएका नवजात शिशुलाई एनआईसीयू आवश्यक परेमा हालका लागि नयाँ मेडिकल कलेजमा उठाउने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
एनआईसीयूमा रहेका नवजात शिशुलाई थप स्वास्थ्य समस्या भएमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, अस्पतालमा पीआईसीयू सेवा नभएको अवस्थामा पनि आवश्यक परेको खण्डमा यो सेवा दिन मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले बताए । साथै, सर्पदंशका बिरामीका लागि एउटा आईसीयू शैया छुट्टै राखिएको समेत पौडेलले बताए ।
गत भदौ २१ गते यसै अस्पतालमा पीआईसीयू सुविधा नहुँदा मंगलपुरका एक बालकको सर्पदंशको कारण मृत्यु भएको थियो । भरतपुर अस्पतालमा यसअघि २ वटा नियो न्याटल भेन्टिलेटर थियो । एउटा केही महिनाअघि नै बिग्रेको र अर्कोको पनि सेन्सर गएकाले दुवै प्रयोगमा छैनन् ।
२ वटा भेन्टिलेटर बिग्रिए पनि स्वास्थ्य महाशाखाले केही महिनाअघि नै भरतपुर अस्पताललाई थप ४ वटा नियो न्याटल भेन्टिलेटर पठाएको थियो । अस्पताल प्रशासन अहिले यसैको जडानमा लागिरहेको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।